The OPPO Reno2 ga-abata na ekwentị atọ n'ọnwa a | Gam akporosis
N’izu a ka ekwuputara ụbọchị ngosi nke OPPO Reno2. Ọ bụ ọgbọ nke abụọ nke ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China, mgbe nsonaazụ ọma ha na-enweta na nke mbụ. Na ụkpụrụ, e gosipụtara na na ihe omume a anyị ga-ezute ekwentị pụrụ iche, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ ga-enwe ngụkọta nke ụdị atọ ga-abata na ya.
Aha ndị a e leaked ekwentị ọhụrụ atọ anyị ga-ahụ n'ime oke OPPO Reno2. Nke mere na anyị nwere ike nweta a doro anya echiche nke ihe Chinese ika kwadebeere a ọgbọ ọhụrụ nke igwe. Gịnị ka anyị ga-atụ anya n’aka ha?
Ekwentị atọ ndị a anyị ga-ahụ n'August 28 na mmemme ngosi Ha bụ Reno 2, Reno 2Z na Reno 2F. Atọ dị iche iche maka ọgbọ ọhụụ nke OPPO Reno2. Ekpughewokwa ụfọdụ nkọwa banyere ekwentị atọ a, na-egosi na ha ga-abụ ụdị dị n'ime etiti na etiti etiti ya.
Reno 2 ga - abụ ihe kachasị ike nke ụdị ndị a, na nhazi Snapdragon 730 n'ime, nke mere na ọ ga-oru n'ime adịchaghị n'etiti-nso nke Chinese ika. Reno 2Z ga - eji ihe ntanetị MediaTek Helio P90 mee ihe dịka ị maralarị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka o doro anya na akara ndị China na-achọ ịhapụ anyị iche iche na ndị a OPPO Reno2. Yabụ na ị ga-enwe ntakịrị ihe niile, n'akụkụ dị iche iche nke etiti ya, wee nwee ọnụnọ maka ụdị ndị na-ege ntị niile. Ihe dị mkpa n'ihi na a na-amalitekwa ụdị ndị a na India, ebe etiti dị mkpa.
Echere dị mkpụmkpụ ugbua, na August 28 anyị ga-amata ndị a OPPO Reno2 na eze. Ya mere o yikarịrị ka ụbọchị ndị a a ga - enwe ọhụụ ọhụrụ banyere ọgbọ ọhụrụ a nke ekwentị ndị China. Anyị ga-ege ntị na akụkọ ndị ọzọ gbasara ha na ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Modelsdị atọ sitere na OPPO Reno2 ga-ekpughere ọnwa a